Virgil van Dijk oo sharad adag la galay dhamaan kooxaha ay xafiiltamaan Liverpool – Gool FM - Idman News
Virgil van Dijk oo sharad adag la galay dhamaan kooxaha ay xafiiltamaan Liverpool – Gool FM
(Liverpool) 11 Sebt 2019. Daafaca reer Holland ee Virgil van Dijk ayaa xaqiijiyay in Liverpool ay ka go’an tahay inay guuleysato dhamaan kulamada soo socda ay ka ciyaari doonto tartamada horyaalka Premier League iyo Champions League.
Liverpool ayaa kula ciyaari doonto kooxda Newcastle United toddobaadka soo socda horyaalka Premier League, kaddib kulamadii caalamiga ahaa ay isbuucan ciyaareen xulalka qaramada isreebreebka Euro 2020.
Xiddiga sanadka ee Yurub ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Waxaan dooneynaa inaan sii wadno bilowga wanaagsan ee xilli ciyaareedka oo aan badino kulan walba ee ina horyaala, waxaan ciyaari doonaa 7 kulan ka hor ciyaaraha caalamiga ah ee soo socda”.
“Waxaan dooneynaa inaan badino kulan walba, ujeedkeena waa inaan guul gaarno 7-da kulan ee soo aadan, taasna waa waxa aan dooneyno inaan sameyno”.
“Aad ayey u adag tahay in la go’aamiyo tirada dhibcaha ee looga baahan yahay in lagu guuleysto horyaalka Premier League, mana aqaano haddii tirada dhibcihii aan gaarnay xilli ciyaareedkii hore ay ku filnaan doonaan xilli ciyaareedkan, laakiin waan ognahay waxa ay Man City sameyn karto”.
“Waxaan sidoo kale ku jiri doono kulamo muhiim ah tartamada kale ee aan dooneynay inaan ku guuleysano, isbuucyada soo socda waxaan ciyaari doonaa ku dhawaad ​​Sabtida iyo Talaadada waqti kasta”.
“Waxaan ciyaari doonaa kulamo qaar ee adag, waxaan Chelsea kula ciyaari doonaa meel ka baxsan garoonkeena, sidoo kale Napoli ayaan kula ciyaari doonaa Champions League, sidoo kale tartanka FA Cup ma fududa, waxaan qadarineynaa sida ay u adag tahay xilliyada soo socda ama inta ka dhiman xilli ciyaareedka”.
Jumco wngsn asxpteyda 10k oo Like ah hala gu soo yaaco
Waa sidee ra’ayiga ciyaartoyda qolka labiska ee Barcelona kaga aadan inuu dib u soo laabto Neymar Jr?? – Gool FM
Alisson Becker oo ka warbixiyay xilliyadii ugu fiicanaa ee xirfadiisa kubadda cagta – Gool FM
Previous Previous post: Mar kale iyo Barnaamijka Waydii Waxaad Tabayso ka qaybgal Jimcaha. Waxaa maalin…
Somali News – Wararka Soomaaliya (11,104)